चुनाव हारेपछि कमल थापाको रुवावासी ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/चुनाव हारेपछि कमल थापाको रुवावासी !
काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लामो समय अध्यक्ष रहेका कमल थापा पछिल्लो महाधिवेशन पछि पराजित भएका छन् । आफ्नो विरासत ढलेपछि थापाले दिनहुँ आ क्रो श पोखिरहेका छन् । निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनासाथ उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उनले ज्ञानेन्द्रका कारण आफु पराजित भएको भन्दै अब राजतन्त्रको एजेण्डा नबोक्ने घोषणा समेत गरे ।
मंगलवार पनि उनले फेरी विज्ञप्ती जारी गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र प्रति आ क्रो श पोखेका छन् । पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको आन्तरिक चुनावमा निर्मल निवास र पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नांगो हस्तक्षेपको भत्सर्ना र निन्दा गरेका छन्। उनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्मल निवासको हस्तक्षेपलाई पहिलो घटना नभएको भन्दै यसअघि २०७४ सालमा पार्टी फुटाउन पनि भूमिका निभाएको दाबी गरे।
अहिले शतप्रतिशत राजावादीहरू भएको पार्टीमा त राजाको ठाडो र फोहरी हस्तक्षेप हुन्छ भने भोलि राजसंस्था स्थापित हुँदा अन्य पार्टी र राजनीतिमा राजाको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर भन्ने हाम्रो नैतिक धरातल समाप्त भएको छ। विगतमा झैं राजाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संस्थामा हस्तक्षेप हुँदैन भनेर अब हामीले कुन मुखले भन्ने ? ,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
राजसंस्थाका बारेमा र पार्टीलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाउन चाहने निर्मल निवासको योजनाका वारेमा अब राप्रपा भित्र बहस शुरू हुने उनले बताए। यस्तै उनले महाधिवेशन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैमा आभार व्यक्त गरेका छन्। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यलाई बधाई र सफल कार्यकालको निम्ति शुभकामना दिएका छन्।
विदेशमा अलपत्र परेकालाई फर्काउन गगन थापाको माग